रातो टिका लगाएका इसाई धर्मका प्रचारक ढकाललाई कारबाही होला ?
काठमाडौँ । शान्तिको एजेण्डामा इसाई धर्मको प्रचार गर्ने उद्देश्यले युनिभर्सल पिस फेडरेशनको आयोजनामा एसिया प्यासिफिक समिट २०१८ होटल ह्यातमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त कार्यक्रममा विदेशी अतिथिहरूको उपस्थिती रहेको छ ।
यो सम्मेलन नेपालमा बढ्दै गएको हिन्दू धर्मलाई लक्षित गरेर गर्न लागिएको हो र यसका लागि नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष एकनाथ ढकालको सक्रियतामा भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
ईशाई धर्मको प्रचारका लागि गर्न लागिएको सो संस्थाको कार्यक्रमको विरोध प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गरेपछि सरकार कार्यक्रमको सहआयोजकबाट पछि हटेको छ ।
म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेनलाई सरकारले अतिथि सत्कार नगर्ने भएपछि ढकाल समस्यामा परेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारलाई समेत विवादमा पार्ने रातो टिकामा लगाएका इसाई धर्मका प्रचारक एकनाथ ढकाललाई कारबाही होला ? आम नागरिकको चासो बढेको छ ।
नेपालमा ढकाललाई इशाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएको समाचारमा उल्लेख छ । ढकालको कार्यक्रममा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, नेतृ सुजाता कोइराला, आरजु देउवालाई समेत प्रभावमा पारेको चर्चा चलेको छ ।
यद्धपी काठमाडौंमा शुरु भएको ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको जनाएको छ ।